Tena Ambany Tokoa Ve No Fihevitry Ny Japoney Ny Amerikana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Avrily 2015 3:17 GMT
Lahatsoratra iray vao haingana tao anatin'ny gazety Amerikana “USA Today” no naka fomba fijery tsy dia nahazatra loatra rehefa nitatitra momba ny fitsapankevitra iray vaovao nataon'ny Pew Research nampitahàny ny fomba fifampijerin'ny andaniny sy ny ankilany eo amin'ny Japoney sy ny Amerikana .
Ny famintinana azy manokana natolotry ny Pew Research momba ireo vokatra azo tamin'ilay fitsapankevitra dia mila hifanohitra tanteraka amin'ilay famoaboasana nataon'ny USA Today:
Sarotra be ny hamaritra ny fomba nisafidianan'ny USA Today hanasongadina ny lazaina fa fahatsapana miiba ananan'ireo Japoney momba ny Amerikana. Misy fomba fijery ao Japana, araka ny ambaran'ilay fitsampankevitra, hoe tsy olo-marina sy tena miasa mafy toy ny Japoney ny Amerikana, na dia mandany adim-pamantaranandro maro aza ny Amerikana miohatra amin'ireo Japoney mitovy laharana aminy, araka ny filazan'ny OCDE.
Na izany aza, misy ihany ny kely azo ihoriranana ao anatin'ilay fitsapankevitra nataon'ny Pew Research. Azo vakiana eto (Eng) ny famintinana.